Wasaaradda waxbarashada oo xaqiijinta Amniga imtixaanka kala hadashay Boliiska – Radio Muqdisho
Wasaaradda waxbarashada oo xaqiijinta Amniga imtixaanka kala hadashay Boliiska
Kulankani maanta xarunta Taliska Boliiska Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ay ku yeesheen Wasiirka waxbarahada iyo Tacliinta Sare ee Soomaaliya iyo Taliyaha Ciidanka Boliiska Soomaaliyeed Sareeyo guuto Maxamed Sheekh Xasan Xaamud oo ay wehliyaan Saraakiisha Boliiska, ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimo kale duwan oo la xiriira imtixaanaadka mideysan oo ay wasaaradu wado.
Inta kulanka uu socday ayaa Wasiirka waxbarashada iyo Saraakiisha Ciidanka Boliiska waxa ay isla gorfeeyeen sida ugu wanaagsan ee ciidamada ay hubin karaan decumentiiyada imtixaanaadka mideysan iyo xaqiijinta ammaanka mudana imtixaanka uu socdo, iyadoo saraakiisha si buuxda ay u balanqaadeen in door muhiim ay ka qaadanayaan arintaasi.
Taliyaha Ciidanka Boliiska Soomaaliyeed sareeyo guuto Maxamed Sheekh Xasan Xaamud oo kulanka kadib la hadlay Radio Muqdisho Iyo SNTV ayaa faah faahin ka bixiyay kulanka dhexmaray Taliska Boliiska iyo Wasiirka Waxbarashada.
“Waxaa sharaf noo ah mas’uuliyiinta waxbarashada ay nagu soo booqdaan xarunta Taliska Boliiska oo ay hogaamneyso wasiirka waxbarashada Khadro runtii arinta aan ka wada hadalnay arin taariikhda Soomaaliyeed gali doonta 25 sano ka badan in imtixaan mideysan la qaado ee dugsiyada sare waa la soo dadaalay waxbarashada waa la soo horumariyay daladaha dadaal badan ayay soo galeen hadda xiligi Dowladnimada la horumarin lahaa ayaa la taaganyahay”. ayuu yiri Taliyaha Boliiska.
Wasiirka Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Khadro Bashiir Cali ayaa dhankeeda sheegtay in ay ka wada hadleen iyada iyo saraakiisha Boliiska sida ay u wajahayaan sugida ammaanka iyo hubinta Imtixaanka mideysan oo wasaarada ka qaadeyso dugsiyada Sare .
“Waa u jeedaan in maanta marti aan u nahay Taliyaha ciidanka boliiska iyo saraakiishiisa si aan ugula hadalno sugida amniga goobaha imtixaanaadka mideysan lagu qaadayo talooyin badan waan is weydaarsanay waxaana jeclahay in wax walbo ay hagaagi doonaan”. ayay tiri Wasiir Khadro.
Wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta Sare ayaa imtixaanaadka mideysan oo ay qaadeyso waxa muhiim uu u yahay umadda Soomaaliyeed gaar ahaan ardayda Soomaaliyeed taasi oo qeyb ka ah horumarada xolwiga uu dalka ku tilaabsanayo, waxaana imtixaan mideysan in la qaado uu saldhig u yahay dowladnimada oo soo laabaneysa.
Wasiirka Caafimaadka oo kormeertay Isbitaalka Deyniile-Sawirro